Masinina fanadiovana sy fanodinana voa - Mpanamboatra sy mpamatsy milina fanadiovana sy fanodinana voa any Sina
5xzs-40ds milina fanadiovana sy fanodinana voa
5XZS-40DS Seed Cleaning & Processing Machine dia manana fanadiovana rivotra avo roa heny, fanadiovana sivana, ary fiasa manasaraka ny gravité. Ity maodely ity dia misy fiasa maro be amin'ny fanadiovana maso karazana finday iray ka mahatonga azy io ho tsara kokoa ho an'ny fampiharana mivelatra kokoa. Ary manana fahaiza-manao 30-35 taonina isan'ora, izay malaza amin'ny fizarana fanadiovana voa.
Ny fiasan'ny 5XZS-10D Seed Cleaning & Processing Machine: fanonganana varimbazaha (tsy voatery), fanadiovana rivotra, fanadiovana mialoha ny vibration, fanasarahana ny gravité.
5XZS-10DGT milina fanadiovana sy fanodinana voa
Ny milina fanadiovana sy fanodinana voa 5XZS-10DGT dia natao manokana amin'ny fanadiovana rivotra, fisarahana amin'ny gravité, sivana vibratory manasaraka sy manara-penitra izay mampitombo ny fahombiazan'ny fanadiovana, manamaivana ny akanjo sy ny rovitra ary ny fanamorana ny fanesorana sy ny fiovaovana.
5XZS-20DS milina fanadiovana voamaina madio ho an'ny ampemby katsaka sesame